Shiinaha jumlada tayo sare leh shaati gacmo dhaadheer oo shaati dhaadheer Midab saafi ah 100% funaanado cudbi soosaarayaasha iyo alaableyda | RE-HUO
Shaati gacmo dhaadheer oo tayo sare leh oo jumlo ah Midab saafi ah 100% funaanado cudbi ah
Nooca alaabta: funaanad t
Waxyaabaha: 180gsm 100% cudbi
Midabka: Madow / caddaan / cawl / buluug cirka / casaan / jaalle / oranji
Cabir: XS / S / M / L / XL / 2XL
1.In midabka keydka.
Midabada keydka, MOQ-da waa 50 gogol oo funaanad midab waliba leh, waxaadna dooran kartaa cabirro badan.
Tirinta warshadda dharka
Warshadda dharka ee aan iskaashi la leenahay waxay leedahay agab dhar ah oo ka kooban 128 midab, MOQ qaybtan ka mid ah dharka waa 200 gogo 'funaanad midabkiiba, wareegga waxsoosaarku waa 3-5 maalmood ka dheer yahay shaarka sheyga dharka. midabada la heli karo.
Haddii kor ku xusan uusan lahayn midabka aad rabto, waxaan sidoo kale leenahay adeegga dharka loo habeeyay, waxaan u habeyn karnaa dharka iyadoo loo eegayo shuruudahaaga, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad bixiso midabka Pantone ee dharka, ama u soo dir gabal dhar ah warshadeenna.
Waxaan sidoo kale haynaa adeegyadan soo socda.
Waxaad dooran kartaa hal ama in kabadan habab daabicis ah si aad funaanadaada uga dhigato mid moodada badan.
Waxaad noo soo dirtaa nashqadaada anaguna waan u daabici doonnaa sida aad codsatay, Haddii aadan aqoon sida loo sameeyo naqshad funaanad, waxaad noo soo diri kartaa astaantaada ama fikraddaada, oo naqshadeeyeheenna ayaa kuu dhammaystiri kara naqshadda.
Waxaan bixinaa adeeg sumad iyo sumad gaar ah, sameynta funaanado leh astaan ​​kuu gaar ah.
Hore: Dumarka jumlada ah Logo Custom Logo Daabac Maaliyado Gabdho Xagaaga Cagaaran
Xiga: Calaamadda Gaarka ah ee Jumlada ah Daabac Shirt Polo Gaaban oo Degdeg ah
Dharka caadiga ah ee suufka jirka lagu qurxiyo ...